Buffalo Thai Home #Igumbi 2 Budget
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguRuj
Yihotele enamabali ama-3 kwisiqithi. Umgangatho ophantsi unendawo yokwamkela iindwendwe, indawo yokutyela kunye necafe. Umgangatho wokuqala nowesibini ngamagumbi eendwendwe.
Amagumbi abucala axhotyiswe ngegumbi lokuhlambela labucala kunye nazo zonke izinto eziluncedo. Konke ukubhukisha kuza kunye nesidlo sakusasa esincomekayo.
Indawo yethu yegumbi ayinkulu, ijikeleze i-4 * 4 sq.m. Nangona kunjalo ngokuqinisekileyo inendawo eyaneleyo yokuhlala kwakho. Ukuba ujonge into ecocekileyo, esisiseko kwaye efikelelekayo, ngokuqinisekileyo silukhetho lwakho olungcono edolophini.
ISakhiwo sethu sisembindini wesiqithi esikufutshane ne "walking street". Indawo icwangciswe kakhulu kwaye uninzi lweyona nto inomtsalane, iindawo zokutyela kunye neebhari zikumgama wokuhamba ukusuka kwindawo yethu.
1. 5 imizuzu yokuhamba ukuya ePattaya Bech(unxweme oluphambili) kunye ne-10mins yokuhamba ukuya eSunrise Beach.
2. 1 min ukuhamba ukuya kwiindawo zokutyela
3. 5 imiz ukuhamba ukuya kwiindawo zentselo
4. 1 min ukuhamba ukuya kwivenkile elula
5. Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya ekhemesti naseklinikhi
Umbuki zindwendwe ngu- Ruj
Mnu Ben, umphathi wethu kwindawo yethu uyafumaneka 24/7. Ubekwe kumgangatho ophezulu, ukuba kukho nayiphi na imeko kaxakeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ko Lipe